Waa maxay saamaynta COVID-19 ku leedahay goobta dhismayaasha fuulitaanka
Waqtigan xaadirka ah, darnaanta dillaaca cudurka sambabka cusub ee kaadida ayaa ka sarreeyey kii SARS ee 2003. In kasta oo cudurka dillaaca cusub ee dalkeyga hadda si fiican loo xakameeyo, haddana xaaladda dillaaca cusub ee caalamiga ah wali waa mid aad u daran. Haddaba saamayn intee le'eg ayay ...
Madasha Shirka Iskaashiga Caalamiga ah ee Warshadaha Scaffolding 2017 ee Shiinaha
Madasha Shirka Iskaashiga Caalamiga ah ee Warshadaha Scaffolding 2017 ee Shiinaha ayaa si guul leh loogu qabtay Nofeembar 27, 2017 magaalada Feicheng, Tai'an, Gobolka Shandong. Madashan waxaa martigaliyay Ururka Qaab -dhismeedka Shaqa -sameynta Shiinaha ...
Shirka Shirarka Sannadlaha ah ee 2020 Shirka Shiinaha iyo Shirka Shanaad ee Dhismaha Aluminium -ka ee Is -weydaarsiga Horumarinta Farsamada
Laga bilaabo Oktoobar 18-keedii illaa 20-keeda, 2020, oo ay martigelisay Ururka Samaynta Scaffolding ee Shiinaha, oo ay fulisay Shengtong Technology Group Co., Ltd., oo ay si wadajir ah u abaabuleen shirkado badan oo hormuud u ah warshadaha qaab-dhismeedka ee Shiinaha, 2020 Sanduuqa Xirfadaha Samaynta ee Shiinaha Sannadlaha Mee. ..
Muuqaalka warshadaha qaab dhismeedka
Horumarka joogtada ah ee warshadaha, jaangooynta, xoojinta, baaxadda iyo horumarka farsamada ayaa hoos u dhigay qiimaha fuulitaanka qaab dhismeedka. Isla mar ahaantaana, tartanka qiimaha uu keenay amoun weyn ...
Nabadgelyada dhismayaasha dhismaha
Sanadihii la soo dhaafay, sababtoo ah dhismaha qasan iyo suuqa kiraynta, wax soo saarka sharci-darrada ah iyo iibinta tuubooyinka birta iyo dhejiyayaasha tayada yar ayaa caan ahaa. Tiro badan oo tuubooyin bir ah oo aan u qalmin iyo dhejiyayaal ayaa ku soo qulqulay goobta dhismaha. Intaa waxaa dheer ...